Ama-Proteas women anqobe umdlalo wokuqala bedlala ne-Bangladesh
u-Chloe Tryon nokapteni u-Dané van Niekerk badlale indima enkulu e-all-round ekuhleleleni ama-Momentum Proteas ukunqoba ngama-runs angu-106 umdlalo wokuqala we Cricket South Africa (CSA) Women’s One-Day International (ODI) series bedlala ne-Bangladesh e-Potchefstroom ngoLwesihlanu. Iqembu lasekhaya lingaphambili ngo-1-0 emidlalweni emihlanu.
i-Player of the match u-Tryon, ushaye o-four abayisishagalolunye kanye no-six abathathu ukufika ku-65 emabholeni angu-42 futhi wathola no-2/15 kuma-overs amahlanu. Ukapteni ushaye ama-boundaries ayisithupha njengoba eshaye ama-runs angu-44 emabholeni angu-52, ukulandelise ngokuphosa i-spell esihle njengoba ethole u-3/23 njengoba esondeze iqembu lakhe ngasekunqobeni.
Usuku luqale ngokuthi iqembu lasekhaya libeke umphumela ongu-270/9 ekupheleni kwama-over abo emuva kokunqoba i-toss nokushaya kuqala. Ovula ngokushaya, u-Lizelle Lee (54) naye uthole ama-runs amaningi, washaya u-50 okubekele iqembu lakhe isikhonkwana. u-Mignon du Plessis no-Laura Wolvaardt bavalile ngokushaya njengoba bethole u-26 umuntu emunye.
i-South Africa iqale kahle nge-partnership yama-runs angu-67 phakathi kwa-Lee no-Wolvaardt ngaphambi kokuthi u-Wolvaardt ekhishwe u-Nahida Akter (2/22) kwi-over yesi-13. u-Trisha Chetty uhlale imizuzu engu-27 ukuthola u-13 emabholeni angu-23 kodwa wakhishwa nge-lbw u-Rumana Ahmed (1/38) nge-over yesi-21. u-Lee usheshe walandela, ehulwa ibhola elihle eliphume kwi-right-hand offbreak ka-Salma Khatun nge-over yesi-24.
u-Mignon du Preez no-Van Niekerk bazimise kahle izinto, bashaya ama-over angu-10 bendawonye futhi bahlanganisa ama-runs angu-52 nge-wicket yesine ngaohambi kokuthi u-Du Preez akhishwe u-Akter othole i-wicket yakhe yesibili.
Iqembu lasekhaya beliku-178/5 emuva kokuphuma kwa-Van Niekerk ekhishwa u-Jahanara Alam (2/62) ngesikhathi ama-wicket ephuma ngokulandelana. u-Tryon uhole abasemsileni, eqiniseka ukuthi babeka umphumela osile ekugcineni.
Izivakashi zikhishwe zinama-runs angu-164. Baqale kabi njengoba belahlekelwe ovula ngokushaya u-Murshida Khatun ekhishwa u-Marizanne Kapp (1/14) nge-over yesibili kwi-innings kodwa u-Sanjida Islam (35 off 63) no-Fargana Hoque (69* off 146) babuye kahle, bahlanganisa ama-runs angu-52 nge-wicket yesibili. Ukapteni we-South Africa uqhubekile wakhipha abashaya phezulu, wakhipha u-Islam, u-Nigar Sultana (6 off 16) nokapteni u-Rumana Ahmed (3 off 5) kuma-overs akhe okuqala amathathu.
Ama-offbreaks ka-Raisibe Ntozakhe (1/21) athulise i-Bangladesh futhi kwakha incindezi. Kube nama-run out amabili, kwaphuma u-Fahima Khatun (0) no-Salma Khatun (2), u-Salma Khatun ukhishwe ukuphosa kwa-Ismail.
u-Tryon usheshe wakhipha u-Jahanara Alam (6) no-Nahida Akter (0), kwashiya izivakashi ku-112/9, kodwa inkani ka-Panna Ghosh ayikwenzanga kwalula ukunqoba kweqembu lasekhaya. Lomdlali oshaya ku-No. 11 ushaye ama-runs angu-23 emabholeni angu-27, wahlanganisa ama-runs angu-52 no-Hoque ongaphumanga ngahambi kokuthi u-Mignon du Preez amukhiphe, ethola i-wicket yakhe yokuqala ye-ODI futhi wanqobisa iqembu lakhe kusele amabhola amathathu.
Umdlalo wesibili uzodlalelwa e-Senwes Park nge-Sonto, 6 May. Umdlalo uzoqala ngo-09:45.
u-Salieg Nackerdien ubekwe njengomqeqeshi obambile wama-Momentum Proteas Ama-Proteas women akulungele ukuhlangana ne-Bangladesh i-Cricket South Africa imemezele amaqembu ama-Proteas women azodlala ne-Bangladesh CSA announces Momentum Proteas contracted squad list Ama-Proteas esifazane afuna ukuqeda ngamandla Imvula inqoba umdlalo wesine we-Women’s T20 e-Centurion u-Raj no-Mandhana banqobisa i-India women ngendlela encomekayo i-India inqobe kumdlalo wokuqala we-T20 Ama-Proteas women azimisele ngokubuya Mandhana no-Yadav banqobela i-India women i-ODI series u-Mandhana, u-Goswami no-Pandey babeka i-India ngaphambili ngo-1-0 bedlala ne-Proteas women